FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiChichewa IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChuvash IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMingrelian IsiMixe IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTajiki IsiTarascan IsiTelugu IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isiWallisian
AmaNgqina kaYehova sele eqalisile ukwakha ikomkhulu lawo elitsha kufutshane neSterling Forest Lake (okanye iBlue Lake) kumaphandle ephondo laseNew York. Yintoni ayenzayo ukuze akhusele izilwanyana zasendle kunye nendalo?
AmaNgqina aye asibiyela isiza sawo ukuze iinyoka namafudo angangeni aze onzakale. Olu cingo luhlolwa rhoqo ukuze kuqinisekwe ukuba akukho zilwanyana zithubelezayo zize zivaleleke esizeni. Emva kokuba kugqityiwe ukwakhiwa nocingo lwasuswa, naziphi na iinyoka ezifumaneke kulo mmandla ziza kufuduselwa kwenye indawo.
Ukuze iintaka zingaphazanyiswa, imithi yagawulwa ebudeni bobusika. Emva kokuba kugqityiwe ukwakhiwa, amaNgqina aza kulungiselela iintaka zikwazi ukubuya.
Oogandaganda baza kulungisa umhlaba ebudeni bukaOktobha noMatshi ukuze iimbewu zentyatyambo yehisope zikwazi ukunwenwa zize zintshule. Lo msebenzi uyalandelelelwa nakubeni ezi ntyatyambo zingazange zibonwe eWarwick ukususela ngo-2007.
KwiSterling Forest Lake, ekwimida yesiza, kukho amadada neentlanzi ezahlukahlukeneyo. Ukuze abakhi bakhusele eli chibi, bakhethe ukusebenzisa iindlela zokwakha ezingayonakalisiyo indalo. Ezi ndlela ziquka ukutyala uhlaza eluphahleni lwezakhiwo oluza kunceda ekususeni ubumdaka bamanzi emvula nasekwehliseni amanzi aya echibini. Ukongezelela, uhlaza olukhoyo olungqonge eli chibi luyakhuselwa.
Elinye iNgqina elijongene nendalo kwesi siza lithi: “Kufuna ixesha elininzi ukuqiniseka ukuba uhlaza nezilwanyana zikhuselekile, sekunjalo kwesi siza saseWarwick siza kuhlala sisenza loo nto kanye.”
Emva kokuba besiseBrooklyn, eNew York, ukususela ngo-1909, kutheni sifudukela kumantla eNew York?